कसैलाई थाहा छ,हाम्रो मृत्यु कहिले हुन्छ ? : अङगदान गरौँ - Makalukhabar.com
कसैलाई थाहा छ,हाम्रो मृत्यु कहिले हुन्छ ? : अङगदान गरौँ
जन्म पश्चात् मृत्यु अबस्वम्भावी छ, यो प्रकृतिको नियम हो । हरेक जीवात्माको मृत्यु कहिले, कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा हुन्छ केही थाहा हुँदैन । प्रख्यात रुसी साहित्यकार लिओ टोल्स्तायको ‘व्हाट मेन लिभ बाइ ?’मानिसलाई के दिइएको छैन र ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सुर्यास्त अगाडी मृत्यु हुने व्यक्तिले समेत वर्षौं खप्ने जुत्ता अर्डर गर्ने र बिग्रेमा सजाय गर्ने कठोरता देखाउदा मानिसलाई आफ्नो आवश्यकता के हो भनी थाहा नदिएको झैँ हामी सबै आज हेरिरहेका छौँ, भोलि के हो भनी कसैलाई थाहा छैन । तसर्थ, आज बाटै हामीलाई भोलि आवश्यक पर्ने वस्तुको जगेडामा लागौ । यस धर्तीमा जबसम्म हामी रहन्छौ तब सब सत्कर्म गर्दै मानव सेवामा रहनु नै जीवनको पुण्य कमाउने उपाय हो । जुन सुकै धर्म वा सम्प्रदायमा हेर्ने हो भने पनि मानवीय कर्मको माध्यमबाट नै धर्मको मार्गमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र मोक्ष प्राप्ति हुन्छ ।
हामीले हरेक दिन रक्तदान जीवनदान भन्ने नारा देखि रहेका छौँ । धेरैले रक्तदान गरेर नयाँ जीवन प्रदान गरेका छौँ, हामी कतिले रक्तदानको महत्त्व र सामान्य मानिसले दान गर्दा स्वयमा कुनै हानी गर्दैन भन्ने थाहा नपाइरहेका पनि छौँ । अमेरिकामा रहेका अर्जुन प्रसाद मैनालीले सय पटक भन्दा रक्तदान गरेका छन् र उनी यसको महत्वको प्रकाश पार्दै सबैलाई बुझाउने प्रयासमा समेत रहेका छन् । कत्ति व्यक्तिले प्लेटलेट्स र बोन म्यारोको समेत दान गरेका छन् । अमेरिकामा रक्तदान गर्ने नेपालीहरूको एउटा संस्था समेत रहेको छ, जसले विभिन्न ठाउँमा रक्तदानको आयोजना गर्ने गर्दछ । यस बाहेक पनि नेवास् अर्गनाइजेसन तथा बिआरटि नेपाल लगायत अन्य सङ्घ(संस्थाले समेत यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिरहेकाछन् । नेपालीहरू विश्वका जुनसुकै भागमा रहे पनि मानवसेवामा समर्पित रहेको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । विभिन्न देशमा रक्तदान गर्न मिल्ने आ(आफ्ना प्रावधान छन्, जसलाई सम्बन्धित देशमा रहेका रेडक्रसको कार्यालयमा गई बुझ्न सकिन्छ ।
अंगदानलाइ इसाई, मुस्लिम, बुद्दिस्ट, हिन्दु, सिख लगायत सबै धर्मवालम्बीहरुले गर्न उपयुक्त छ भनी धर्म गुरुहरुले समेत विभिन्न स्थानमा उल्लेख गरेका छन् । क्रिस्टियन धर्मको म्याथिउ १०:८ मा “”बिरामीलाई निको पार्न….तिमीले स्वतन्त्र रूपमा पाएको, स्वतन्त्र रूपमा देऊ”” भनी उल्लेख गरिएको छ । क्याथोलिक धर्मगुरु पोप जोन पौल दित्तीयले आफ्नो इनसाइक्लिकल चिठीमा भगवानले हामीलाई दिएको यस विशिष्ट उपहारलाइ अंगदान गरी भगवानको उपहार अर्कोलाई प्रदान गर्नसक्छ भनी उल्लेख गरेकाछन् ।
“”वसम्सी जिर्नानी यथ विहय
अन्यनी सम्यती नवन्दी देहि। “”
( “”एक व्यक्ति नयाँ पोसाक लगाउछौ भने पुरानो लाई छोडी रहेका हुन्छौ त्यसै गरी प्राणले नयाँ शरीर स्वीकार गर्दै पुरानो र बेकारी शरीरलाई छोडी रहेको हुन्छ । “”)
अग्नि चौलागाईं, मेरो खबरबाट साभार